Ny safidy tsara indrindra amin'ny tantara foronina ho an'ny tanora
Fanamarihana momba ny tantara an-jatovo
Boky Top 3 an'i Jay Asher
Angamba ilay marika "Tanora olon-dehibe" dia fialan-tsiny mba hialana amin'ny famandrihana momba ny literatiora iray mifantoka kokoa amin'ny olon-dehibe fa tsy amin'ny tanora. Ny marina dia ireo mpanoratra an'ity karazana ity dia niroborobo tato anatin'ny taona vitsivitsy izay nahomby tokoa, natambatra ny tantaram-pitiavana tamin'ny teboka antenantenany ...
Boky James Dashner 3 ambony indrindra
Ny literatiora ho an'ny tanora dia manana fitiavam-bolo saika misy eo amin'ny karazana romantika (kinova adolescent) sy ny nofinofy na ny foronin'ny siansa. Fantatrao fa ny indostrian'ny famoahana dia mandidy fa heveriny ho fantany izay hitokona lozabe amin'ireo mpamaky voalohany. Na eo aza izany, raha te hanana ny rariny isika dia afaka mahita karazana ...
Boky Jeans Manga 3 tsara indrindra
Raha misy mpanoratra literatiora ho an'ny tanora nipoitra mafy tato ho ato tao Espana dia Blue Jeans izany. Francisco de Paula Fernández dia nampiasa tamim-pahombiazana solon'anarana vaovao sy manome soso-kevitra ho an'ny mpihaino zatovo azy. Ny fanatonana ireo mpamaky eo anelanelan'ny 12 sy 17 taona dia azo atao ...
Masoandro mamatonalina nataon'i Stephenie Meyer
Ary rehefa toa namboarina tamin'ny tolona haisoratra hafa i Stephenie Meyer, tamin'ny lakilen'ny tantara momba ny heloka bevava, ary tamin'ny fanafahana izay heveriny fa momba ny saga amin'ny takariva, amin'ireo vampira adolantsento sy ny kaikitry ny nofo misy fofon'ny tongolo lay. ary ny mandrakizay, amin'ny farany dia tsy izy ilay izy. Satria Meyer ...
Antsy an-tanana, nataon'i Patrick Ness
Ny tantaran'i Todd Hewitt, notantaraina tamin'ity boky ity, no paradigma an'ny olombelona mifandraika amin'ny tontolo iainany. Ny tontolon'ny fiarahamonintsika ankehitriny ihany no raisina ho fanoharana futuristic amin'ity tantara ity. Ny fomba fijery mandray an'io tantara foronina siansa io dia manome alalana antsika ...
Riquete ilay misy pompadour, ny Amélie Nothomb
Iray amin'ireo volom-borona mahavariana ankehitriny ny Amélie Nothomb. Ny bokiny teo aloha navoaka tany Espaina, The Count Neville Crime, dia nitondra antsika ho lasa tantara an-tsarimihetsika tsy manam-paharoa misy endrika napetraka izay, rehefa hitan'i Tim Burton, dia hivadika ho sarimihetsika, miaraka amin'ny ankamaroan'ny famokarana azy teo aloha. Fa amin'ny…
Tsy oloko ianao, avy amin'i Chloe Santana
Misy fotoana mety fialamboly tsy misy dikany ny fitiavana. Mety hino mihitsy aza ianao fa voafehinao io, fa ny fotoana fitiavanao tsy misy fiverenana dia mifarana foana. Afa…… rehefa tsy mandeha intsony ny raharaha, dia kivy ianao. Raiso amin'ny hatsikana izany. Efa ...
Navotan'i Patrick Ness
Ny fiatrehana olana ara-tsosialy sasany avy amin'ny fitantaran'ny tanora dia ilaina manoloana ny fahatsiarovan-tena sy ny fanatontosana ny maha-izy azy momba ny fahalemem-panahin'ny vahoaka. Ary hoy aho hoe "tsy maintsy atao" satria amin'ny vanim-potoanan'ny tanora no apetraka ny lamin'ny ho olon-dehibe. Miharihary ny fahatanorana ...
Valo, nataon'i Rebeca Stones
Raha te hanoratra ny tantara tonga lafatra, dia mila mahita ny mizana mandaitra mety hateraky ny asa boribory isika. Mety amin'izay ny manonitra ny fieboeboana, ny fihenjanana ary ny fihetsem-poikan'ny fahatanoran'ny mpanoratra na ny mpanoratra, miaraka amin'ny fototra, ny asa ary ny fahaizan'ny mpanoratra olon-dehibe. ARY…